लाखौंको मानव सागर माठमाडौंमा, १४ बर्ष यताकै ठूलो जनप्रर्दशन भएको नेताहरुको दावी (फोटो फिचर सहित) | Sindhu Jwala
लाखौंको मानव सागर माठमाडौंमा, १४ बर्ष यताकै ठूलो जनप्रर्दशन भएको नेताहरुको दावी (फोटो फिचर सहित)
९ माघ, काठमाडौं । संसद् विघटनविरूद्ध शुक्रबार राजधानीमा गरिएको शक्ति प्रदर्शनमा लाखौंको मानव सागर उत्रिएको छ । राजधानी लगाएत ३ वटा प्रदेशबाट आज उल्लेख्य जनसहभागिता भएको शक्ति प्रर्दशन १४ वर्ष यताकै ठूलो जनप्रर्दशन भएको नेताहरुले दावी गरेका छन् । जनताको उत्साहाजनक सहभागिता देखेपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु समेत उत्साहित बनेका छन् ।
प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताबाट यो समूहका नेताहरु सन्तुष्ट देखिन्छन् । सडकमा नउत्रिएको पार्टीपंक्तिमा पनि यो प्रदर्शनले उत्साह थपेको नेताहरुको समीक्षा छ । आज भएको बिशाल जनप्रर्दशनमा बागमति, गण्डकी र २ नम्बर प्रदेशबाट मानिसहरु गाडी रिर्जभ गरी काठमाडौंमा आईरिएका थिए ।
उक्त विशाल विरोध सभालाई नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषाल लगाएत नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायाधीशहरुलाई अराजकताको साक्षी नबन्न आग्रह गरेका छन् । पार्टीभित्र लामो संघर्ष र बहस पछि पनि केपी ओलीलाई तह लगाउन नसकेको जिकिर गर्दै प्रचण्डले केपी ओलीले अबको लडाई हारिसकेको दावी गरे । ‘न्यायपूर्णको लँडाई केपी ओलीले हारीसके अब हामीले जितिसक्यौं’, प्रचण्डले भने । त्यसैगरी कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद पुर्नस्थापना नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाउ दिंदै फेरि केपी ओलीसँग कुनैपनि हालतमा नझुक्ने ठोकुवा गरे ।
कार्यक्रममा देखिएको जनसहभागिताले तटस्थ बसेका, यताउता गर्ने र सोच्नेहरुलाई पनि प्रभावित बनाएको कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुको दावी छ ।
एक लाख मानिस सडकमा उतार्ने प्रचारसहित यो समूहले गरेको शक्ति प्रदर्शनका कारण काठमाडौंका सडकहरु शुक्रबार दिनभरजसो अस्तव्यस्त बने । पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रियसभा गृह अगाडिको मूल सडकमै ‘टी आकार’ बनाएर आयोजित सभाका कारण उपत्यकाका धेरै रुटको यातायात प्रभावित बनेको थियो ।
प्रदर्शनबाट मुख्य गरी नेकपाको कार्यकर्ता पंक्ति बढी उत्साहित बनेका थिए । पुस १४ मा उपत्यकास्तरीय प्रदर्शन गरेको माधव–प्रचण्ड समूहले अन्य दल र नागरिक समाजसहित संयुक्तरुपमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, शुक्रबार एक्लै प्रदर्शनको आयोजना गरेको हो ।
ओलीबाट फैलाइएको भ्रमलाई यो शक्ति प्रदर्शनले चिर्ने काम गरेको सहभागी एक नेताले बताए । शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शनलाई सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि नैतिक दबाव दिने उद्देश्यका रुपमा समेत यो समूहले लिएको देखिन्छ । सम्बोधनका क्रममा नेता भुसालले ‘सेटिङ बाहेक अरु कुनै आधारमा संसद् पुनःस्थापना नरोकिने’ ठोकुवा नै गरे ।
शुक्रवारको जनप्रदर्शन संसद् पुनःस्थापना नभए जनआन्दोलन गरिने चेतावनीपूर्ण संकेत दिन आयोजना गरिएको नेताहरू स्वीकार्छन् । सँगै, निर्वाचन आयोगको वैधानिकताप्रति पनि खबरदारी गर्न यो प्रदर्शनलाई गरिएको बताउँछन् ।
स्मरण रहोस शुक्रबारको प्रचण्ड–माधव समूहको शक्ति प्रदर्शनपछि ओली समूहले पनि त्यसको काउन्टरका लागि माघ २३ गते काठमाडौंमा बृहत सभा गर्ने भएको छ ।
This entry was posted in फोटो फिचर, समाचार, विशेष. Bookmark the permalink.
जनसाँस्कृतिक महासंघ, बाग्मती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकबाट एकदर्जन प्रतिनिधित्व
पाँचपोखरीको वडा कार्यालय आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा
कञ्चन प्रति गरिने सम्मान अधुरै, जिंउदो ईतिहास, ताजा स्मरण